Shina fampidinana haingam-pandeha avo lenta amin'ny lozisialy Exchanger hafanana orinasa mpanamboatra | Chemequip
Ny mpanondrana hafanana ao anaty ondana dia lovia ho an'ny tsirairay na bankin'ny takelaka Laser maromaro izay asitrika ao anaty kaontenera misy ranoka. Ny mpanelanelana amin'ny takelaka dia manafana na mampangatsiaka ilay ranoka ao anaty kaontenera, miankina amin'ny filanao. Izany dia azo atao amin'ny dingana mitohy na amin'ny batch.
Size: namboarina manokana
Seranan-tsambo Delivry: Seranan-tsambo Shanghai
Inona ny mpanondrana hafanana ondana lovia fanitrihana?
Ity mpanondrana hafanana lohan'ny fandrobohana ity dia mety amin'ny fikirakirana ranon-javatra voaloto na voapoizina amin'ny ampahany betsaka, izay mila hafanaina na hafanaina. Izy io dia mahatohitra bebe kokoa amin'ny loto (na azo diovina mora foana) ary miaraka amin'ny fikorontanana voajanahary noforonin'ny takelaka, dia manome famindrana hafanana optimum amin'ny fotoana rehetra ity exchanger hafanana ity.
Ny vokatra fanondrahana ondana loam-pandrefesana dia tena matanjaka ary azo atokisana, ary koa ny faharetany sy ny faharetany dia amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny indostria, ka mahatonga ity vokatra ity ho vahaolana tonga lafatra rehefa mangatsiaka ranoka betsaka amin'ny rano, glycol, gazy na refrigerant. Ankoatr'izay, ny singa dia vita tanteraka amin'ny vy tsy misy fangarony ary azo amboarina mba hifanaraka amin'ny famaritana mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
Ka na apetraka ao anaty fantsom-panafody misy alikaola ny mpanondrana hafanana ondana, na omena ao anaty tanky ny vokatra dia manome antoka izahay fa hahita fahombiazana lehibe amin'ny famindrana hafanana ianao.
Inona no ilana ny mpanova hafanana ao anaty rano?
Ny exchanger hafanana ao anaty rano dia azo ampiasaina betsaka amin'ny ankamaroan'ny fampangatsiahana rano sy fanamainana:
(1) Ny exchanger hafanana loaka fanitrihana dia azo ampiasaina ho toy ny singa fanarenana hafanana
(2) Ny exchanger hafanana lohan'ny fanitrihana dia be mpampiasa amin'ny fikarakarana akoho amam-borona sy ny fihenan'ny hazan-dranomasina
(3) Ny exchanger hafanana lohan'ny fanitrihana dia azo ampiasaina amin'ny sehatry ny fanaova-mofo
(4) Ny exchanger hafanana lohan'ny fanitrihana dia azo ampiasaina amin'ny fanafanana anatiny
Ny tombotsoantsika amin'ny mpanondrana hafanana ondana lovia fanitrihana?
Rehefa mampitaha ny hafanana fantsom-panafody dia mampitondra ny tombony miharihary ny mpampita hafanana atsika.
1, ny hafanana alentika dia mampiorina ireo takelaka misy ondana misy ny firafitra miorina amin'ny famolavolana ny fikorontanan'ny haavon'ny haavon'ny hafanana haingana.
2, ny hafanana alentika manondraka ny takelaka ondana mifanitsy amin'ny fantsona malalaka dia mora kokoa amin'ny fanadiovana sy fanoloana takelaka
3, ny takelaka ondana mpanondrana hafanana ao anaty rano dia manana faritra fifanakalozana hafanana lehibe kokoa noho ny fantsom-pamokarana hafanana isaky ny metatra toradroa.
4, ny exchanger hafanana asitrika dia mampiasa ny vy tsy misy fangarony 304 na 316L fitaovana mamela azy hanana harafesina avo lenta - fanoherana.
5, ny exchanger hafanana ao anaty rano dia mety ho mora volavolaina amin'ny habe sy ny fahaizany.
Ny fitaovana famokarantsika ho an'ny mpanondrana hafanana ondana lozika
Fampisehoana fampiroboroboana takelaka fisitrihana ondana anay
Ny mpampita hafanana ondana rendrika dia nampiharina betsaka tamin'ny fampangatsiahana rano sy fanafanana:
Fampisehoana horonantsary mpanondrana hafanana ao anaty lohanay
Manaraka: Chiller horonantsary nianjera namboarina
Chiller immersion vita amin'ny Custom-made
Chiller immersion fanoherana avo lenta
Chiller immersion ho an'ny fihenan-tsakafo
Chiller immersive ho an'ny fanafanana
Exchanger hafanana anaty rano
Mpanalefaka hafanana anaty rano
Mpivarotra hafanana ao anaty rano ho an'ny fanodinana akoho amam-borona
Exchanger hafanana anaty rano ho an'ny reaktor
Exchanger hafanana anaty rano ho an'ny fampangatsiahana hazan-dranomasina
Laser nohosorana chiller fanitrihana vilia
Fametahana hafanana anaty lovia vita amin'ny lasitra laser
SS304 fampidirana hafanana anaty rano
SS316 chiller immersion
Mpamatsy hafanana asitrika vy
Exchanger hafanana takelaka, Stainless vy Dimple palitao , Masinina ranomandry slurry indostrialy, Masinina ranomandry ranoka, Masinina ranomandry slurry ara-barotra, Milatsaka sarimihetsika rano chiller ,